नारायण काजी श्रेष्ठले थ; र्काएपछि ऋषि धमलाले फर्काए यस्तो जवाफ, बोल्दा बोल्दै आँ:सु झा’रे (भि;डियो सहित) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/नारायण काजी श्रेष्ठले थ; र्काएपछि ऋषि धमलाले फर्काए यस्तो जवाफ, बोल्दा बोल्दै आँ:सु झा’रे (भि;डियो सहित)
नारायण काजी श्रेष्ठले थ; र्काएपछि ऋषि धमलाले फर्काए यस्तो जवाफ, बोल्दा बोल्दै आँ:सु झा’रे (भि;डियो सहित)
नेकपा (प्रचण्ड- नेपाल) समूहका नेता नारायण’काजी श्रेष्ठले पत्रका’र ऋषि धमलालाई चुप लाग्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार राजधानीमा गरेको शक्ति प्रदर्शन सभामा सम्बोधनका क्रममा श्रेष्ठले आफूहरूले सभा आयोजना गरेको भन्दै धमला’लाई अर्को कार्य’क्रम नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
यो पटकको सभामा पनि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चर्चामा आएका छन् । अघिल्लो पटक’को सभामा पनि मञ्चमै झोक्कि’एको उनको भिडि’यो सामाजिक सञ्जालमा भाइर ल भएको थियो । यो पटक उनले पत्रकार ऋषी धमलालाई मञ्चवाटै थ’र्काएका छन् ।
उनले भाषण गरि’रहँदा पत्रकार दि र्घामा केही हल्ला हुन्छ । उनले पत्रकार साथीहरु त्यहाँ हल्ला नगर्नुस भन्दै आग्रह गर्छन । तर पनि हल्ला शान्त हुँदैन । उनी अलि उग्र हुँदै पत्रकार साथी’हरु तपाईह’रु चुप लाग्नुस् हल्ला नगर्नुस भन्छन् ।
‘पत्रकार साथी’हरू हामीले यहाँ सभा गरिरहेका छौं। त्यसैले तपाईं’हरू चुप लाग्नुस। सुन्नुभो? धमलाजी तपाई अर्को का’र्यक्रम नगर्नुस्। चुप लाग्नुस्’, श्रेष्ठले भने’ ‘धमलाजीले राम्रै काम गरिरहनु भएको थियो। जनसमुदा’यको अन्तर्वार्ता लिइर हनु भएको थियो। तर, यो काम पछि गर्नुहोला।’
आजको आम’सभामा ऋषि धमला लाई नारायण काजी’ श्रेष्ठले गरेको अपमान पछि धमला भावुक बनेका छन् । ना’रायण काजी श्रेष्ठ ले मंच बाटै ऋषि धमला चुप लाग्नुस् र कार्यक्रम रोक्नुस भन्दै कराए पछि धमला ले भावुक हुदै भने, “मेरो क्रेज देखेर नेता’हरु डराएर मलाई कराएको हो तर म चुप लाग्दिन । म भनेको जनताको लागि बोल्ने हो र बोलि रहन्छु ।” ऋषि धमला अन्तर्वार्ता को क्रम मा भा,वुक समेत भएका छन् र आँखा भरि आशु समेत पारेका छन् ।
बिचरा ! गोरो परिवारको बिजोक अवस्था, ट्वाइलेट भित्र बस्न बाध्य छन्, सबैले हेप्छन,थुक्छन भन्दै रोए (भिडियो सहित)
अन्ततः लिक भयो पल र समिक्षाको बिचको सम्बन्धको अडियो
जननेता मदन भण्डारीको घर रेखदेख गर्ने भण्डारी दम्पतिको पिडा (भिडियो)
१४ वर्षको छोरालाई लौन के भयो यस्तो? आमा डाँको छाडेर रुदै मिडियमा -(भिडियो सहित)
राजा बिरेन्द्र यती सरल रहेछन, उनको जिवन शैल र सयनकक्ष यती साधारण रहेछ हेर्नेको आखा रसाउछ (भिडियो सहित)